China KY-1077 Silicone surfactant adjuvants maka ụlọ ọrụ agro-chemicals na ndị na-emepụta | Juyou
KY-1077 Silicone surfactant adjuvants maka kemịkal agro
KY-1077 adjuvant spray bụ surfactant na-agbasa nke ukwuu dabere na trisiloxane ethoxylate. Kedu nke nwere ike iwetulata mgbali elu nke mmiri ịgba mmiri nke ọma karịa ndị na -ahụ maka ịgba ịgba. a na -ebelata akụkụ kọntaktị nke ihe mgbaze na mbara ihu, na -eduga n'ịbawanye mkpuchi mkpuchi. Ọ na-abụkarị, esemokwu oke nke KY-1077 adjuvant (@ 0.1 wt %) bụ 20.5 mN/m. N'aka nke ọzọ, ethoxylate octylphenol nke nwere nkeji 10 EO (ihe na -adịghị ahụkarị ihe na -efe efe) na 1.0 wt % na -enye mgbali elu nke naanị 30 mN/m.
KY-1077 adjuvant spray bụ surfactant na-agbasa nke ukwuu dabere na trisiloxane ethoxylate. Kedu nke nwere ike iwetulata mgbali elu nke mmiri ịgba mmiri nke ọma karịa ndị na -ahụ maka ịgba ịgba. a na -ebelata akụkụ kọntaktị nke ihe mgbaze na mbara ihu, na -eduga n'ịbawanye mkpuchi mkpuchi. Ọ na-abụkarị, esemokwu oke nke KY-1077 adjuvant (@ 0.1 wt %) bụ 20.5 mN/m. N'aka nke ọzọ, ethoxylate octylphenol nke nwere nkeji 10 EO (nke a na -ejighịkarị arụ ọrụ) na 1.0 wt % na -enye mgbali elu nke naanị 30 mN/m.
• Onye na -agbasa agbasa nke nwere oke iru ala dị ala
• na -akwalite mbelata olu ịgba
• na -akwalite nnabata ngwa ngwa nke agrochemicals (oke mmiri ozuzo)
• Na -emezi mkpuchi mkpuchi
• Nonionic anaghị egbu egbu
Ọdịdị elu (0.1%, mN/m) (a) ： 20-22
Viscosity, cP @ 25 ° C ： 10-30
Nnukwu ike ndọda @ 25/25 Celsius C ： 1.01-1.02
Ojiji ngwaahịa na onunu ogwu
Na usoro Agrochemical: ejiri ya mee ihe dị ka usoro agrochemical. A na -enweta arụmọrụ kacha mma site na ịkwanye usoro ahụ na pH 6.5 -7.5, a na -atụ aro ka ejiri KY -1077 adjuvant fesa na mkpokọta dịkarịa ala 5%, dabere na mkpokọta ahụ.
Dị ka Ngwakọta Ngwakọta Tank: ejiri iji melite mkpuchi ịgba, melite nnabata ma ọ bụ ikwe ka mbelata olu ịgba. KY-1077 adjuvant spray na-arụ ọrụ nke ọma dị ka ihe na-enyere aka n'akụkụ tank mgbe ngwakọta ịgba
1) n'ime pH nke 5-8
2) ejiri n'ime awa 24 nke nkwadebe,
Ngwa nwere ike
KY-1077 ịgba adjuvant bụ nke ọma na ngwa ịgba n'ụwa niile. Ngwa ngwadị ka ndị a:
Ngwa Ọnụego ojiji a na -ahụkarị
Ndị na -achịkwa Uto Osisi 0.025% ka 0.05%
Ọgwụ ogbugbu 0.025% ruo 0.15%
Ọgwụ ahụhụ 0.025% ka 0.1%
Fungicide 0.015% ka 0.05%
Fertilizers na Micronutrients 0.015% ruo 0.1%
200kg/drum drum, 25kg/plastic plastic, 5g/pice, iji chekwaa ya na ebe dị jụụ. Iji gbochie ìhè anyanwụ, njem ngwongwo na-adịghị ize ndụ.
Nke gara aga: JY-2120S onye nnọchi anya defoamer
Osote: JY-1028 Silicone surfactant adjuvants maka kemịkal agro